Dhakhaatiirta oo fariin u diray hooyooyinka ilmaha kasoo dilmaan | Saxil News Network
Dhakhaatiirta oo fariin u diray hooyooyinka ilmaha kasoo dilmaan
March 4, 2019 - Written by editor
Baaritaan la sameeyey ayaa lagu ogaaday in aysan jirin khatar soo gaaraysa dumarka dhala ilmaha maydka ah haddii ay uur kale qaadaan muddo yar kadib.
Iyadoo ay jirto in badanaa ay dumarka sugaan muddo sanad ah ka hor inta aysan uur qaadin mar labaad, ayaa weli aanan la sheegin cadaymaha la xirriira arrinkan.
ku dhawaad 14,000 oo kiiis oo baaritaan lagu sameeyey ayaan lagu helin wax khatar ah oo ka imaanaya arrinkan.
Khubaro ka soo jeeda dalka Ingiriiska ayaa sheegay in baaritanku uu yahay muhiim laguna ogaanayo xaqiiqada.
Dalal badan ayaa waxa ka jira ka hor tag la’aan ama qorshe yari lagu yaraynayo dhibaatooyinka dumarka soo gaara kadib marka ay dhalaan.
Ugxaanta lagu keydiyo da`da 40-meeyada oo laga dayriyay
Prof Alex Heazell, oo wax ka bara jaamacadda Manchester ayaa sheegay in fariinta uu u dirayo dumarka wajaha dhibaatooyinkan ay tahay “inaysan walwalin.”
“Haddii ay waalidiinta helaan warbixinno ku saabsan sababta ay ilmahooda u dhasheen iyaga oo mayd ah, go’aan ka gaarista ah marka ay qaadi doonaan uur kale ayaa waxa ay ku xirnaan doontaa marka ay cilmi nafsi ahaan diyaar u yihiin.”
Waxa uu sheegay inaysan jirin sabab kale ee ay usugi karaan hooyooyinka uur kale qaada kadib muddo sannad ka badan.
Ma habboontahay inay sugaan misa aysan sugin?
khubarada samaynaysa baaritaankan ayaa waxa ay eegayaan qoraal diwaangashan oo gaara ilaa 14,452 dumar ah oo ilmahooda ay dhinteen kadib marka ay dhasheen, kuwaas oo ka soo kala jeeda Waqooyiga Australia, Finland iyo Norway.
Baaritanka ayaa lagu ogaaday in dumarka wajahaya arrinkan aysan diyaar u ahayn inay qaadan uur kale.
Dr Annette Regan, oo wax ka barta Jaamacadda Curtin ee dalka Australia, ayaa sheegtay in natiijooyinka ka soo baxay baaritaanka ay muhiim u ahayd dadka talo siiya dumarka dhala ilmaha maydka ah.
Waxa ay sidoo kale sheegtay in dumarka aysan helin wakhti fiican oo ay ku caafimaadaan kadib marka ay khatarta noocan ah la kulmaan, kuwaas oo ay ku sheegtay inay macluul ama nafaqo la’aan ka qaadan kadib marka ay dhalaan ilmo mayd ah ama ka dilmaan.
Balse waxa ay sheegtay in badanaa uu arrinkan dhaco xilliyada ay dumarka